Antso ho an'ny mpitondra, Arovy i Andry Rajoelina
2009-01-29 @ 08:34 in Politika
Misy ny antso ataon'ny namana hanagadran'ny mpitondra ny Ben'ny tanànan'Antananarivo noho izao toe-java-misy izao. Na dia nanohitra ny TGV mafy aza aho dia hafa mihitsy kosa ny ahy no takiako, aoka ny mpitondra mihitsy no hiaro an'i Andry Rajoelina satria tsy tombotsoan'ny mpitondra na oviana na oviana ny hanagadra azy amin'izao fotoana izao. Manjary mikorontana mitady fitakiana indray ny sasany na ny maro amin'ireo mpanaraka azy, zara aza mba milamindamina aloha ny toe-draharaha fa mijaly loatra ny fandraharahana maty antoka noho izay telo andro misesy tsy niasana izay. Fa raha samborina i Andry Rajoelina sao lasa indray ny filazana fa mbola gadrain'ny mpitondra hatrany ny 'demaokrasia'.
Efa karazan'ny "fahadisoana" ny nisamborana ireo mpianatra telo lahy "TGV" nampangaina ho nitoraka cocktail molotov ny tranon'ny minisitera roa sy ny trano fiofanana ho mpitsabo tetsy Befelatanana, nanararaotan'ny TGV hitakiana ny famoahana azy ireo teny amin'ny fitsarana kanjo nivadika ho fandrobana sy fandoroana ny tranon'ny TVM sy ny RNM izany. Efa "fahendrena" ny tsy nitifirana ireo mpilahatra sy mpandroba nandrava ny fananam-panjakana sy fananan'olo-tsotra ka ny an'ny filoha no tena maro tamin'izany nanerana ny firenena tamin'ny andro voalohan'ny fandrobana (alatsinainy), araka ilay teny nataon'ny filoha hoe "raha ny fananana rava mbola azo averina ihany fa ny ain'olona kosa tsy ho tafaverina mihitsy".
Miangavy ny filoha kosa aho mba hatsahatra hatreo ny "fireharehana" sy ny "fandrahonana" hisambotra an'izatsy na izaroa, fa raha hisambotra dia "tampohana" ihany no hanaovana azy. Aleo antso ho an'ny rehetra hanarina ny simba sy hiverina amin'ny asa andavanandro no lazaina fa tsy manisy teny akory izay ataon'ny ankilany na hanameloka ny ankilany amin'izao andro izao. Aoka ny rehetra samy "ho latsa-panenenana" tamin'izay fahadisoana nataony avy fa tsy hanondro ny hafa ho manana ny diso. Rano raraka tsy azo raofina ny nitranga teto amin'ny firenena ka samy hitandrina amin'izay ataony avy ny rehetra amin'ny andro ho avy.
Mangataka ny roa tonta aho hifanatona sy hifampindinika fa tsy misy manana ny tombony samy resy ianareo mpitondra ny firenena sy mpitondra an'Antananarivo amin'izao fotoana izao ary ny maty antoka indrindra dia ny vahoaka ihany. Rehefa mifampidinika re aoka tsy hisy fepetra mialoha fa ny tombotsoam-bahoaka tsinjovina, aoka ny filaminan'Antananarivo sy ny fampandrosoana azy sy ho an'i Madagasikara mihitsy no jerena. Aoka samy hanana ny anjara toerany ka ny mpitondra ny firenena hisahana ny firenena ary ny mpitondra an'Antananarivo hisahana an'Antananarivo ary aoka samy hamita ny fe-potoana iasany avy ny roa tonta. Omeo an'Antananarivo ny anjara volany, ampahafantaro ny besinimaro eo anatrehan'ny roa tonta izany, dia anjarany ny mamita ny asany. Avelao hiasa ny mpitondra, tsikerao izy eo am-pandraisana fanapahan-kevitra mety hivily lalana fa samy hotsarain'ny vahoaka ihany rehefa tonga ny fotoam-pifidianana.
Ny mpivavaka amin'ny vahoaka kosa aoka hivavaka ho an'ny firenena, ny rehetra samy hiverina amin'ny asa andavanandrony indray. Fa na dia torotoro noho ny zava-mitranga ankehitriny aza isika vahoaka, tompon'andraikitra ihany koa tamin'ireny seho rehetra ireny. Tompoon'andraikitra avokoa isika rehetra ka tsy misy afa-miala amin'izany fa izay mandà izany ahiako mbola hahavita hadalana indray. Mankasitraka izay nahavaky ny lahatsoratra hatramin'ny farany!
sary nalaina tamin'i Madainitiatives's Blog io ilay nolazaiko omaly
jentilisa, 29 janoary 2009